onlineakhabar.com: OMG !! पुलिसकै अगाडी श्रीमतीले कुटिन् र कपडा समेत च्यातिदिइन् आफ्नो श्रीमानको
Amazing World, Husband and Wife, India News, International » OMG !! पुलिसकै अगाडी श्रीमतीले कुटिन् र कपडा समेत च्यातिदिइन् आफ्नो श्रीमानको
OMG !! पुलिसकै अगाडी श्रीमतीले कुटिन् र कपडा समेत च्यातिदिइन् आफ्नो श्रीमानको
हामीहरु प्राय पुरुषले गर्ने महिलामाथीको अत्याचारको बारेमा सुन्ने गर्दछौ । तर कहिलेकाँही पुरुष पनि महिलाबाट यस्तो अत्याचारमा परेका हुन्छन् । हालै भारत अहमदाबादको एक अदालतमा त्यस्तै दृश्य देख्न मिलेको छ । कोर्टरूम भन्दा बाहिर एक महिलाले आफ्नो पति लानि नराम्रोसँग कुटपिट गरेकी छन् । त्यहाँ उपस्थित भएका सुरक्षाकर्मीहरुले उक्त पिडित पुरुषलाई बचाउनु परेको थियो ।
ठक्करबापा नगरमा काम गर्ने एक हिरा कर्मचारी सुनवाईको लागि कोर्ट पुगेका थिए । त्यहाँ पटक पटक उनका पत्नीले घर फर्किनको लागि अनुरोध गरिरहेकी थिइन् तर उनि मानिरहेका थिएनन् । धेरै पटक आग्रह गर्दापनि आफ्नो पतिको नमाने पछि आफ्ना पतिलाई कुटपिट गरेकी छन् । यसरी पत्नीले सबै सामु कुटपिट गरेपनि पिटाइ खाने पतिले पुलिसमा कुनै उजुरी दिएनन् । उनकी पत्नीले आफ्नो र नाबालिग छोरीको लागि पति सँग मुआब्जाको माग गरेकी थिइन् ।
डिभोर्स पछि गुजारा भत्ताको रुपमा पत्नीले उनि सँग १० लाख रुपैयाको माग गरेकी छन् । पति भन्छन् उनि आफू साधारण कर्मचारी भएको र यति ठूलो रकमको व्यवस्था गर्न नसक्ने बताउँछन् । यो सुनेपछि उक्त महिलाले पुन: थप्पड हान्न शूरु गरेकी थिइन् र उनको कपडा समेत च्यातिदिएकी थिइन् । अन्त्यमा झगडाले उग्र रुप लिएपछि पुलिसले उक्त पुरुषलाई बजाउनु परेको थियो ।
Tags : Amazing World Husband and Wife India News International